वडाध्यक्षका लोकप्रिय उम्मेद्वार श्रीधर सुवेदी भन्छन्, ‘म वडाको चौकीदार हुँ’ – Satyapati
Loading... आजः बुधबार, असार २४, २०७७/ Wednesday 8th July 2020 5:50 am
कोहलपुर नगरपालिका–६, मा उपनिर्वाचन
वडामा रहेका युवाहरुले उनैलाई पछ्याउँछन्, वृद्धहरुले पत्याएका उम्मेद्वार हुन्, समाजले भरोसा गरेका असल र स्वच्छ छवी भएका युवा नेता हुन् । वडाबासीलाई अन्य उम्मेद्वारप्रति कुनै प्रकारको भरोसा छैन । त्यसैले पनि श्रीधर अरु प्रतिस्पर्धीभन्दा निकै बलिया र लोकप्रिय उम्मेद्वार हुन् ।
सत्यपाटी । मङ्लबार, कार्तिक २६, २०७६
२०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित भएका वडाध्यक्ष रामसोहन थारुको २०७५ मंसिर ९ गते भएको निधनपछि रिक्त रहेको कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. ६ मा आगामी मंसिर १४ मा वडाध्यक्ष पदका लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ । उपनिर्वाचन नजिकिँदै गर्दा चुनावी चहलपहल तीव्र बनेको छ । कहीँकतै पार्टीका झण्डा टाँगिएका छन् । तर, हुलमुलमा चुनावी प्रचार गर्न कोही निस्किएका छैनन् । यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट वडाध्यक्ष पदमा उम्मेद्वार बनेका श्रीधर सुवेदीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. ६ मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट वडाध्यक्ष पदमा श्रीधर सुवेदी योग्य र सक्षम उम्मेद्वार हुन् । पत्रकारितामार्फत समाजका समस्याहरु नजिकबाट बुझेका श्रीधर आफ्ना लागि कोहलपुर क्षेत्र र त्यसमा पनि विशेषगरी वडा नं. ६ को समस्या नौलो नभएको बताउँछन् । स्थानीय निकायबाट भइरहेका गतिविधि र गर्न सकिने कामबारे उनी जानकार छन् । युवामाझ अत्यन्तै लोकप्रिय, मिलनसार र राजनीतिकरुपले प्रतिशोध साध्नु नभई सबैसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने स्वभावका श्रीधर आफू जन्मे हुर्केको क्षेत्रलाई विकासको नमुना क्षेत्र बनाउने चाहेको बताउँछन् ।
युवा नेता श्रीधर डा.धवलशम्सेर राणाको विकासको मोडलबाट प्रभावित भएको बताउँछन् । राप्रपाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री प्रेमबहादुर भण्डारीले यस क्षेत्रको विकासमा पुर्‍याएको योगदानलाई श्रीधरले प्रेरणा र मार्गनिर्देशनको रुपमा आत्मसाथ गर्दै आएका छन् । राष्ट्रियता, धर्म र सनातन परम्पराबारे राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाबाट दिक्षित उनले ‘आफ्नो क्षेत्र, आफ्नो सान, कोहलपुरमा वडा नम्बर ६ को छुट्टै मान’को मुल लक्ष्यसहित वडा नं.६ को अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवार बनेको बताए ।
उम्मेद्वार भएसँगै श्रीधरले चुनावी प्रचारलाई वडाका टोल र बस्तीहरुमा पुर्‍याइरहेका छन् । मतदाताको उल्लेख्य समर्थन रहेको दावी गर्दै श्रीधरले बाँकी रहेको साढे दुई बर्षमा वडा नं. ६ लाई कोहलपुरकै नमूना वडाका रुपमा विकास गर्ने योजना आफूसँग रहेको दावी गरे । राप्रपा उम्मेद्वार श्रीधर अन्य पार्टीका उम्मेद्वारभन्दा योग्य, शिक्षित, विकासप्रेमी, मेहेनती र स्वच्छ छवीका मानिन्छन् । जसका कारण पनि उनी निर्वाचन जित्ने उम्मेद्वारका रुपमा दरिएका छन् ।
उनले समाजमा न कसैलाई धम्की दिए, न दुख दिए, न भ्रष्टाचारको आरोप उनीमाथि लागेको छ । अहिलेसम्म समाजले उनलाई स्वच्छ छवि भएको युवामध्येमा उभ्याइरहेको छ । निर्वाचन जित्ने एउटै आधार हो, उनी योग्य, शिक्षित र समाजलाई बुझेका युवा हुन् । वडामा रहेका युवाहरुले उनैलाई पछ्याउँछन्, वृद्धहरुले पत्याएका उम्मेद्वार हुन्, समाजले भरोसा गरेका असल र स्वच्छ छवी भएका युवा नेता हुन् । वडाबासीलाई अन्य उम्मेद्वारप्रति कुनै प्रकारको भरोसा छैन । त्यसैले पनि श्रीधर अरु प्रतिस्पर्धीभन्दा निकै बलिया छन् ।
त्यसैले कोहलपुर नगरपालिका वडा नंं. ६ मा राप्रपाले निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्ने निश्चित छ । श्रीधर भन्छन्, ‘म वडाको चौकीदार हुँ, पूर्वाधार विकास र रोजगार सिर्जना गर्ने चौकीदार हुँ । अपाङ्गगतामैत्री, महिलामैत्री, बालमैत्री, वडा बनाउने चौकीदार हुँ । हो म यीनै कारणले वडाको निम्ति चौकिदारी गर्छु, गरिरहनेछु, चाहे चुनावी परिणाम मेरो अनुकुल होस् या नहोस् । यसैले चुनाव जित्ने निश्चित छ, यसमा सबै मतदाताहरुलाई विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु । वडाको विकासका लागि जस्तोसुकै मुल्य चुकाउन पनि तयार छु, समग्रतामा समाज बदल्ने मेरो ध्येय हो ।’
वडाबासीकै साथ र सहयोगमा दिगो विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि उत्पादनमुलक कार्यक्रमसँगै युवा रोजगारका योजना बनाउने उनको प्रतिवद्धता छ । उपनिर्वाचनको प्रचारमा व्यस्त श्रीधरले वडाभित्र सबै प्रकारका समस्या समाधानका लागि अहोरात्र खट्ने बताउँदै आफू अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि वडा नं.६ लाई अबको साढे दुई बर्षभित्र विकास र समृद्धिको नमुना वडा बनाउने योजना सुनाए । आफूले निर्वाचन जितेपछि २४सैं घन्टा वडाबासीसँगै हुन्छु, उहाँहरुका समस्या सुन्ने, वस्तुस्थिति बुझ्ने र आवश्यक सबै सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता उनले व्यक्त गरे ।
‘अरु कुरा गर्छन्, हामी पुरा गर्छौ’ भन्ने प्रतिवद्धताका साथ मेरो उम्मेद्वारी हो । यही अभिलाषाका साथ सम्पूर्ण आमाबुवा दाजुभाईहरुलाई गाई चिन्हमा मतदान गर्न उनले आग्रह गरेका छन् । ‘तपाईहरुकै घरदैलोमा छु र आएको छु, गाई चिन्हमा छाप लगाई अत्याधिक मतले वडाध्यक्ष पदमा जिताउनहोस्,’ श्रीधरले भने, ‘समाजको विकास र उत्थान पहिलो कुरा हो । विभिन्न सामाजिक विकास, चेतना र जागरणका अभियानमा आफूलाई समर्पित गर्नेछु ।’ समग्रमा आफ्नो वडालाई समृद्ध र विकसित बनाउने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, गास, बास र कपासको लागि नमुना वडा बनाउन योजनावद्धरुपले लाग्ने उनको पूर्ण प्रतिवद्धता छ ।
को हुन् श्रीधर सुवेदी ?
तत्कालिन रझेना गाविस वडा नं. ७, हाल कोहलपुर नगरपालिका वडा नं.६ मा जन्मिएका युवा नेता श्रीधर सुवेदी यसअघि पत्रकार हुन् । २०५८ सालदेखि कोहलपुर साप्ताहिकबाट पत्रकारिता सुरु गरेका सुवेदी राजनीति र समाज सेवाप्रति विशेष चासो बोक्ने युवा पनि हुन् । उनी पत्रकारीतासँगै प्रजातन्त्रप्रति आस्था राख्ने पत्रकारहरुको संगठन नेपाल प्रेस युनियनमा आवद्ध भए । उनले स्वतन्त्र समाचार सेवा काठमाडौं, नेपाल एफएम (काठमाडौं), श्री अभिलेख साप्ताहिक (मलेशिया) हुँदै आफ्नो पत्रकारिताको यात्रालाई निरन्तरता दिए ।
२०६३ सालदेखि मलेसियाबाट प्रकाशन सुरु भएको अभिलेख साप्ताहिकमा उनी कार्यकारी सम्पादक भए । मलेसियामा रहेका नेपालीमाझ निकै लोकप्रिय पत्रिका अभिलेख प्रकाशनको क्रममा उनले नेपाल पत्रकार महासंघ मलेसिया शाखाको गठन गरेका थिए । उनी महासंघ मलेसिया शाखाको संस्थापक सचिव हुन् । मलेसियामै रहँदा उनले राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)को मलेसिया प्रतिनिधिसमेत रहेर काम गरे । स्वदेश फर्किएर उनले २०६७ बाट कोहलपुरमै न्युज नमस्ते दैनिक पत्रिकाको प्रकाशन शुरु गरेका थिए ।
उनले न्युज नमस्तेमार्फत स्थानीय क्षेत्रमा भइरहेका भ्रष्टाचार, बेतिथि, सामाजिक विभेदविरुद्ध धावा बोलेका थिए । २०७३ मा उनी कोहलपुर टेलिभिजनको प्रवन्ध निर्देशक भएका थिए । कमल थापाको दिक्षा, डा.धवलशम्शेरको शिक्षा प्रारम्भमा नेपाली काँग्रेससँग आवद्ध भएका श्रीधर हाल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आवद्ध छन् । कांग्रेस नेता वीपी कोइरालाको प्रजातान्त्रिक समावजाद र राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति प्रति प्राभावित भएर उनी कांग्रेसमा आवद्ध भएका थिए । कोहलपुरमै रहँदा नेपाल प्रेस युनियनमा आवद्ध उनी पत्रिका प्रशासनको क्रममा मलेसियामा रहँदा काँग्रेस निकट संगठन नेपाली जनसम्पर्क समिति मलेशियाको संस्थापक सचिव भए । उनी मलेशियाबाटै महाधिवेशन प्रतिनिधिसमेत भएका थिए ।
मुलुकको परिवर्तित अवस्थामा राष्ट्रियताको संरक्षण तथा सनातन धर्म, संस्कृति र पहिचानको सम्बद्र्धनबाट मात्र देश बलियो हुने, राष्ट्रिय सम्बृद्धिको लक्ष्यहासिलहुने र विपिको प्रजातान्त्रिक समाजवादबाट कांग्रेस च्युँत हुँदै गएको भन्दै उनले नेपाली काँग्रेस परित्याग गरेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालमा आवद्ध भए । उनलाई राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य हिक्मत ढकालको पहलमा तत्कालिन राप्रपाका केन्द्रिय उपाध्यक्ष एवं हाल नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डा.धवलशम्सेर राणाले पार्टीमा प्रवेश गराएका थिए । वडा सदस्यदेखि राजनीति सुरु गरेका श्रीधर राप्रपा नेपाल बाँकेको जिल्ला सदस्यसँगै जिल्लाको पार्टी प्रवक्तासमेत भइसकेका छन् । राप्रपा नेपाल निकट पत्रकारहरुको संगठन मिडिया नेपालको केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका श्रीधर २०७४ देखि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सूचना प्रविधि विभागको सदस्य सचिवको पदमा कार्यरत छन् ।
ओली–देउवा गोप्य भेटवार्ता, ‘नेकपा फुटेपछि काँग्रेस सरकारमा जान तयार’
बाँकेमा राप्रपा प्रवेशको लहर (फोटोफिचर)
संसद अधिवेशन अन्त्य, प्रधानमन्त्रीविरुद्धको संकट तत्काललाई टर्‍यो